အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဘောလုံးမန်နေဂျာ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2017
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Manager ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' ဖာဂီ ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ခွင့်ပြုသည်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဘ0အစပိုင်း
ဆာအလက်ဇန်းဒါးချပ်မန်းဖာဂူဆန်ခဲ့သည် အလက်ဇန်းဒါး Beaton ဖာဂူဆန် (ဖခင်) နှင့်အယ်လီဇဘတ် Hardy ဖာဂူဆန် (မိခင်) ကဒီဇင်ဘာလ 31 ၏ 1941st ပေါ်, Glasgow စကော့တလန်မှာမွေး။
သူ Govan အတွက် Shieldhall လမ်းမကြီးပေါ်တွင်သူ့အဖွားရဲ့အိမျတှငျမှေးဖှားပေမယ့် (ကတည်းကဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော) 667 Govan လမ်းမကြီးမှာ tenement မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သူသူ့မိဘအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူ၏ညီဖြစ်သူမာတင်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ မိမိအမြို့, Govan Glasgow, စကော့တလန်အတွက်အလုပ်လုပ်လူတန်းစားရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ရဲ့အဖေအပါအဝင်မြို့မှာနေထိုင်သူကိုလူတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်သင်္ဘောအဆောက်အဦစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ဖြစ်ခြင်း၏မြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အနှစ်သာရမှာတော့သူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်ကဲ့သို့သင်္ဘောအဆောက်အဦရပ်ရွာထဲတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။
တက်ကြီးထွားလာအဲလက်စ်, Broomloan လမ်းမကြီးမူလတန်းကျောင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Govan High School တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည် နှင့် Rangers ဘောလုံးအသင်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်တခြားကလေးတွေနဲ့မတူပဲသူ့ကိုအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုရှိ၏။ သူကတစ်ဦးအသိဉာဏ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုတွေအတွက်နည်းနည်းအတိုးခဲ့နဲ့ဘောလုံးကစားခြင်းဆီသို့ပိုပြီးရှိုခဲ့သည်။
သူ tenement နေအိမ်များအကြား alleyways မှတဆင့်သူ့ညီမာတင်, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဘောလုံးဘောလုံးကန်ပိုမိုနှစ်သက်, သူ၏အဖေကနေတချို့အကူအညီဖြင့်သူတစ်ဦးအလားအလာငယ်ရွယ်ခွက်တဆယ်သို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မိသားစုဘဝ
ဖာဂီဆင်းရဲသောမိသားစုမှလာ၏။ သူ Glasgow ၏ Govan သင်္ဘောကျင်းဧရိယာ၌အသက်တာကိုမှဆင်းရဲသားပေမယ့်ပျော်ရွှင်မိသားစုက start ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ၏အဖေအစောပိုင်းကသင်္ဘောအဆောက်အဦကဏ္ဍတွင်မဆိုလေးနက်သောအထွဋ်ခဲ့သည်ဆို၏ဘူး။ သူကသူ့ကိုနည်းနည်းပဲလုပ်ခပေးသောရှင်သန်မှုများအတွက်အပျော်တမ်းဘောလုံးများအတွက်အခြေချခဲ့သည်။
သို့သော်သူကအလက်ဇန်းဒါး Beaton ဖာဂူဆန် Glasgow သင်္ဘောအဆောက်အဦစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလာသည်ဟုအခွင့်အလမ်းမှအပျော်တမ်းဘောလုံးကစားသမားကျေးဇူးတင်စကားနေအနားယူကြောင်းအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့မွေးဖွားသို့ခြောက်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးသို့လှည့် plater အထောက်အ ။ ဤအချိန်သူယုံကြည်မှုနှင့်ယခုငယ်ရွယ်အဲလက်စ် (အောက်တွင်), သူ့အစ်ကိုနှင့်မိခင်ကိုလုပ်ကျွေးနိုင်ဘူး။
ကံမကောင်းစွာပဲအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်အဘို့, သူ့မိဘနှစ်ဦးစလုံးသောဗြိတိန်သက်တမ်းအသက်အရွယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 67 သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်မတိုင်မီအလားတူရောဂါ (အဆုတ်ကင်ဆာ) မှသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ သို့သော်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်သူများဖြစ်ကြသည်။ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့အဖေယခုနှစ် 66 အတွက် 1979 ၏အသက်အရွယ်မှာအဆုတ်ကင်ဆာ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ ဖာဂူဆန်ရဲ့မိခင်ဧလိရှဗက်ကိုလည်းတစ်နှစ် 64 အတွက် 1986 ၏အသက်အရွယ်မှာအဆုတ်ကင်ဆာ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူ့ကိုသုံးပတ်ကြာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာအဖြစ်မိမိအချိန်းပြီးနောက်အခါသူမသေဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူမ၏ပပျောက်ရေးသေခြင်းတရားသမ္မာသတိရှိကြလော့, လများအတွက်ကြီးမားသောဝေဒနာအတွက်မန်နေဂျာသစ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါဟာသူ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားမိမိခက်ခဲစတင်များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလုနီးပါးထုတ်ပယ်တယ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကအကြောင်းပြချက်။ ဒါဟာဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တစ်ဦး၏ရှည်လျားသောကာလခဲ့ "ကြီးကျယ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု" တူညီသောရောဂါ (အဆုတ်ကင်ဆာ) ကိုမိဘနှစ်ပါးစလုံး loosing ရန်။
ဖာဂီဟာစကော့တလန်အစိုးရဘက်မှာစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်အကွက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် '' ကင်ဆာအစောပိုင်းထောက်လှမ်း '' £ 30million များ၏ပေါင်းလဒ်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ကြေကွဲဖွယ်ရှေ့တွင်ဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုသဘောတူညီခဲ့နှင့်အစောပိုင်းထောက်လှမ်းလူတွေကိုပေးနိုငျသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုရမှ "အချိန်ပို" သူတို့ရဲ့မိသားစုနှင့်အတူဖြုန်းဖို့။
ဟုသူကဆိုသည်: "ကျွန်မရဲ့မိဘများအဆုတ်ကင်ဆာရှိခဲ့ပြောသည်ခံရသတိရပါ။ ငါသညျလညျးအကြှနျုပျသမိခင်အားကြားပြောလေ၏နေ့ကိုအသက်ရှင်ဖို့သာရက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့မှတ်မိသေးတယ်။ ငါဆေးရုံကိုတယ်နှင့်ဆရာဝန်ငါ့ကိုထိုင်သူမကအဆုတ်ကင်ဆာရှိခဲ့ပြောတယ်, ထို့နောက် said: "သူအသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းကိုလေးရက်တယ်ရဲ့" ။ သူကလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အတိအကျလေးရက်အကြာတွင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏သေခံခြင်းနှင့်အချိန်ကိုအစဉ်အမြဲငါဖြစ်ပျက်မြင်ကြပြီ scariest အရာတစျခုဖွစျသညျ။ သို့သော်အမှုအရာသည်ယခုအခါကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, အဆုတ်ကင်ဆာတစ်ဦးသေဒဏ်ဖြစ်မရှိပါ။ အစောပိုင်းကရှာဖွေခြင်းသင်၏အသက်ကိုကယ်တင်နှင့်သင့်မိသားစုနှင့်အတူဖြုန်းဖို့အချိန်ပိုပေးနိုင်ဘူး။ ကျွန်မအဆုတ်ကင်ဆာမှနှစ်ဦးစလုံးသည်ငါ့မိဘများကိုဆုံးရှုံးအတိုင်းဤကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုချင်တယ်။ ငါအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုကင်ဆာမိသားစုများအပေါ်ရှိသည်နိုင်ကိုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲအဲဒီအကြောင်းဘာမှထက်ငါအဖြစ်အစောပိုင်းသူတို့လုပ်နိုင်အဖြစ် check လုပ်ထားရစိုးရိမ်သူမည်သူမဆိုတိုက်တွန်းကြသည်။ "
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မိသားစုနှင့်ဆက်ဆံရေးဘဝ
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်သည်သူ၏နုပျိုအသက်ကာလအတွင်းမန်ချက်စတာ၏တောင်၌နေ၏။ ဒါဟာသူ, Cathy ဖြစ်သူ၏ဇနီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဤမြို့ကိုမှာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံး 1966 အတွက်လက်ထပ်တယ်။
သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးချက်ချင်း fruits.Their ပထမဦးဆုံးအသားမာကုနှင့်အတူမင်္ဂလာ 1968 မွေးဖွားခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြီးနောက်နှစ်နှစ်ပါပဲ။
သူတို့အခြားရှိနိုင်မည်မတိုင်မီသူတို့ကလေးနှစ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ အဆိုပါ 9th ဖေဖော်ဝါရီလ 1972 တွင်, အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်နှင့်ဇနီးဂျေဆန်နှင့် Darren အမည်ရှိချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှာ၏အခြားအစုရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်သည်သူ၏ဇနီး Cathy ကဂရုစိုက်တတ်တဲ့ခင်ပွန်းအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ သူဟာတစ်နေ့တဦးတည်းအနေဖြင့်သူမ၏ခစျြတျောမူခဲ့သညျ။ သူအိမ်မှာအမြိုးသမီးမြား၏အခနျးကဏ်ဍကြောင်းမရှာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာတခါတရံမီးဖိုချောင်အပါအဝင်အိမ်မည်သည်ကျခံထားအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများသူတို့သားသမီးပျော်ရွှင်မှုကိုအတွက်ကြီးထွားကိုမြင်တော်မူ၏။ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်အဘို့, "မိသားစုအရေးပါသောအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအရာအားလုံးပါပဲ။ "
သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး UK မှာအအောင်မြင်ဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ပြထားပါပြီ။ တဦးတည်းအများအပြားအတုယူထိုက်ကြောင်းကိုမြင်ကြပြီ။ သူတို့ရဲ့ဂုဏျအိမ်ထောင်ရေးဘဝထက်ပိုမို 51 နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်ပါပြီ။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: Up ကိုစိုက်ပျိုးကလေးများ
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့သားအကြီးဆုံး, Mark Peterborough ယူနိုက်တက်ဟောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးကယခင်မန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်လုံးတပ်တစ်ခုမှာ Daren 1990 ဖို့တစ်နှစ် 1994 နေသူ့အဖေရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အောက်တွင်ကစားတစ်ချိန်ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအမည်ရှိသော။ သူသည်လက်ရှိတွင်စီမံခန့်ခွဲ Doncaster Rovers စာအရေးအသား၏အချိန်ကအဖြစ်။
နောက်ထပ်အမွှာ, Jason ဖာဂူဆန်လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးအေဂျင်စီပြေး '' Elite အားကစား'' သောကလပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်မိမိအဘ၏နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်ကြိမ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူလည်းတစ်ဦးဖြစ်ရပ်များစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်နေသော။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနှင့်အတူပြဿနာ
ဒါဟာဖာဂူဆန်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းသည်သူ၏အကြီးအကဲဟောင်းနောင်တတဦးဖြစ်စဉ်းစားကြောင်းရှင်းပါတယ်။ သူကဘက်ခမ်းကိုချစ်တော်မူ၏ သူကသားကိုအဖြစ်သူ့ကိုစဉ်းစားသူသည်မိမိဘောလုံးအိပ်မက် လိုက်. သောလမ်းများအတွက်လေးစားပေမယ့်ဘာမျှမရ၏ မိမိအလုံ, ဇွဲနှင့်လူကမှားကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့အလိုဆန္ဒသည်။ သို့သော်ဖာဂူဆန်ကဘက်ခမ်းဟာအစေးအပေါ်အဖြစ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့လစျြလြူရှု, တိုး, သူ့ကိုကြယ်လုပ်သောအဘယ်အရာကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်ကွောငျးကိုယုံကြည်ဖို့ရောက်လာတယ်။
2003 မှာတော့ဖာဂူဆန်မန်ယူကစားသမားဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းထဲမှာအငြင်းအခုံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ သူဟာမန်ယူအသင်းမှာအာဆင်နယ်ရည်မှန်းချက်အပေါ်ကျောကိုခြေရာခံဖို့ပျက်ကွက်၏ဘက်ခမ်းကစွပ်စွဲထားသည်။ ဖာဂူဆန်စွပ်စွဲမျက်နှာမှာရှိတဲ့ကစားသမားထိမှန်ထားတဲ့စိတ်ပျက်အတွက်ဘောလုံး Boot တက်, ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်နှင့်ဘက်ခမ်းအနေနဲ့ဒဏ်ရာစေ၏။
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းသို့သော်တစ်ခုခုကိုပြု၏။ သူကဒဏ်ရာမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအောက်ပါနေ့ကမေးမြန်းထားသည်။ မိမိအကျင့်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ဖာဂူဆန်ကသူ့ကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ သူဘက်ခမ်းသူ့ကိုနှင့်ကလပ်ထက်ပိုကြီးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းယုံကြည်သည်။
ဖာဂူဆန်တစ်ချိန်ကဘက်ခမ်းသည်သူ၏မျက်နှာဒဏ်ရာတစ်အနုပညာရှင်သို့ကိုယျတျောကိုဖွင့်ခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ သူ့ကိုအလိုအရ '' သူကဒဏ်ရာပြီးနောက်ပျောက်တောမှကျော်ကြားမှုကိုလိုက်ရန်သတိဆုံးဖြတ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ် '' ။
ထို့အပြင်သူသည်အဘယ်သူမျှမရှိကွောငျးကိုရေးသားခဲ့သည် "ဘောလုံးအကြောင်းပြချက်" ဘက်ခမ်း Los Angeles မြို့ကိုသွားဘို့။ '' သူကယူနိုက်တက်ရဲ့အများဆုံးမွဲဒဏ္ဍာရီများဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းဖွုနျးတီး။ ' ဖာဂူဆန်ကပြောပါတယ်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ရွိုင်းကိန်းနှင့်အတူပြဿနာ
ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရွိုင်းကိန်း၏သရုပျဖျောထား, သူ့ယခင်ကပ္ပတိန်နှင့်နေကြတယ်, ကြောက်မက်ဖွယ်နိုင်စွမ်းတောင်မှသူ့ကိုတစ်ခုအပြောင်းအလဲမြန်ခြင်းနှင့်ကြောက်စရာကိန်းဂဏန်းသည်အတိုင်း, တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှဆက်ဆက်, များစွာသောကစားသမား။ ကိန်းတစ်ခုသံလက်သီးနှင့်တစ်ဦး Savage လျှာဖြင့်အုပ်ချုပ်, အရာဖာဂူဆန်သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခက်ခဲဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်.
ဖာဂူဆန်ကိန်းတောင်းပန်သူ့ကိုကြည့်ဖို့အတွက် pop ခဲ့ပါကြောင်းရေးသားခဲ့သည်ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးကတည်းက pair တစုံအကြားအများပြည်သူမှတ်ချက်များပြီးနောက်နောက်တဖန်အရုပ်ဆိုးလှည့်လိုက်ပါတယ်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: Ruud နှင့်အတူပြဿနာ
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်တစ်ချိန်ကသူဖြစ်သောကြောင့်မိမိအရိုငျးစိုငျးငှါလာကြ၏အခိုင်အမာရာ Ruud နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့လေသည်။ သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ဂိုးသွင်းဘုရင်ရွိုင်း 2006 အတွက် acrimonious အခြေအနေများအောက်တွင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် left ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကဝီဂန်ဆန့်ကျင်ကားလင်းဖလားဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကာလအတွင်း benched ခံခဲ့ရပြီးနောက် Ruud ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသူ့ကိုကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲ၏တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပြဿနာစတင်ခဲ့သည်။
ဖာဂူဆန်သူအတင်းအကျပ်မိမိလက်ကာလအတွင်း Real Madrid အသင်းသို့ရာတွင်သူ၏အပြုအမူဖို့ရှေ့ဆက်ရောင်းချမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးဆိုပါတယ်။ သို့သော်ဗန် Nistelrooy ကသူ၏အပြုအမူများအတွက်တောင်းပန်မှဇန်နဝါရီလ 2010 အတွက်အပြာထဲကဖာဂူဆန်ရန်ဖုန်းခေါ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ချေးငွေကစားသမားပြန်ခေါ်
မိမိအအမွှာသား Darren ဖာဂူဆန်အားဖြင့်များ၏အိတ်အောက်ပါ Preston မြောက်အဆုံး, အမျက်ဒေါသအတွက်ဖာဂူဆန်ကိုချက်ချင်းက၎င်း၏အသစ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အောက်တွင် Preston ထံမှပစ္စည်းများကိုငှါးရမ်းပေးသည်ကစားသမား Ritchie De Laet, ယောရှုဘုရငျနဲ့မက်တီဂျိမ်းစ်ပြန်ပြောပြ။ သူကနောက်မှမန်နေဂျာ၏ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက် Preston ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ဘဲကစားသမား '' ကိုယ်ပိုင်တောင်းဆိုမှုကိုခဲ့ကြောင်းရှင်းပြသည်။ စတုတ်စီးတီးမန်နေဂျာ တိုနီ Pulis အဆိုပါကစားသမားသူ့အဖွဲ့ရဲ့အထူးကြပ်မတ်အချိန်ဇယားကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်မကြာမီအဖြစ်ကောင်းစွာ Preston ကနေနှစ်ခုသည်ယခင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားများပြန်ခေါ်နောက်မှာနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ပြီးတာနဲ့ဂါရတ်ဘေးလ် Away ဖြတ်ပိုင်းမှခွင့်ပြု
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကင်းထောက်အနေဖြင့်အစီရင်ခံစာဘေးလ်ရိုင်ယန်ဂစ်ကိုအစားထိုးနိုင်သူတစ်ဦးလက်ဝဲခြေကစားသမားများအတွက်ဖာဂူဆန်ရဲ့ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းညွှန်ပြ။ ဖာဂူဆန်သည်ကိုယ်တော်တိုင်သူ့ကိုမျှော်ဘေးလ်ကိုရောက်စေဖို့ကင်းထောက်အဘို့တောင်းလေ၏။ သို့သျောလညျးကို transfer ကိုဖြိုဖျက်ဖွဲ့သောအရာတစ်ခုခုရှိ၏။ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်သူလည်းတိုတောင်းခဲ့ပါတယ်ညည်းညူ။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: အနှစ်ချုပ်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ရှာဖွေရေး
အဆိုပါ 32 နှစ်အရွယ်ဖာဂူဆန်သည်သူ၏မီး, အပြိုင်အဆိုင်သဘောသဘာဝနှင့်အတူချက်ချင်းသက်ရောက်မှုအောင်, 1974 အတွက်အရှေ့ Stirlingshire မှာမိမိစီမံခန့်ခွဲမှုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူကလအနည်းငယ်အကြာတွင်စိန့် Mirren သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း, 1977 အတွက်စကော့တလန်ပထမတန်းချန်ပီယံဖို့သူတော်စင်ဦးဆောင်နေသော်လည်း, သူစာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုအတွက်တစ်နှစ်အကြာတွင်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဖာဂူဆန်ဟာထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်မန်နေဂျာအဖြစ်သူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုခိုင်မြဲကြောင်း Aberdeen နှင့်အတူရှိ၏။ အဆိုပါဆဲလ်တစ်-Rangers ချန်ပီယံသူတို့၏ Breaking, ဖာဂူဆန်ရှစ်ရာသီကျော်သုံးစကော့တလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ခေါင်းစဉ်လေးစကော့တလန်ဖလားတစ်လိဂ်ဖလားတစ်စူပါဖလားနှင့်ဥရောပ Cup Winners 'Cup Aberdeen ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်နိုဝင်ဘာလ 1986 အတွက်ကျော်ကြားပေမယ့် underachieving မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလပ်၏မန်နေဂျာအဖြစ်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ သူ့အလုပ်ကစောစော 1989-90 ရာသီအတွက်အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းလမ်းပိုင်းပြီးနောက်လိုင်းပေါ်သတင်းများအရဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့မိခင်ရဲ့အသေခံခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သူ၏ဆင်းရဲသားကိုစတင် cam ။ သူဟာနီးပါးသူ့ကိုသူ၏အလုပ်အကိုင်အကုန်ကျထားတဲ့အဆုတ်ကင်ဆာသေဆုံးသွားသူကိုမိမိအမိဝမျးနညျးပူဆှေးအချိန်ကြာမြင့်စွာနေခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသူ့ကိုအဘို့, အဲဒီအနီရောင်နတ်ဆိုးတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူကိုမြင်လျှင်နှင့်သူ၏အစောပိုင်းစာလုံးပေါင်းစဉ်အတွင်း FA ဖလားအနိုင်ရ။ မိမိအလုပ်နှင့်အတူသူ့ကိုစောင့်လေ၏။ အောင်မြင်မှုတွေတစ် string ကိုနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်သူတို့ပြောကြွင်းသောအရာသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မိမိအအမွေအနှစ်
စကော့တလန်ပန်းပုဆရာကဒီဇိုင်းဖာဂူဆန်၏တစ်ဦးကကြေးဝါရုပ်တု, ဖိလိပ္ပုသည် Jackson က, 23 နိုဝင်ဘာလ 2012 အပေါ်မန်ယူအသင်းအပြင်ဘက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
14 အောက်တိုဘာလ 2013 တွင်, ဖာဂူဆန်မန်ယူအသင်းအနီးရှိလမ်းကနေအမည်ပြောင်းခဲ့သည်ဘယ်မှာပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက် ရေရဲ့ရောကျ သို့ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန် Way ကို။
Moreso က The ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "squeaky-Bum အချိန်" ဖာဂူဆန်အားဖြင့်စတင်သုံးစွဲမိဿဟာယှဉ်ပြိုင်မှု၏တင်းမာနေနောက်ဆုံးအဆင့်မှရည်ညွှန်းအတွက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည် Collins English အဘိဓါန် နှင့် အောက်စဖို့အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်.
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မွေးမြူရေးမန်နေဂျာများ
ဖာဂူဆန်ဟောင်းကစားသမားအတော်များများတိုနီ Fitzpatrick အဲလက်စ် McLeish, ဂေါ်ဒွန် Strachan, မာကု McGhee, ဝီလီ Miller က Neal Cooper က, Bryan ဂွန်အဲရစ်က Black, Bryan Robson, စတိဗ်ဘရုစ်, မာကု Hughes ကရွိုင်းကိန်းအပါအဝင်ဘောလုံးမန်နေဂျာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်လာဖို့အပေါ်ပြီ ပေါလုသည် Ince ခရစ် Casper, Darren ဖာဂူဆန်, Ole Gunna Solskjær, Henning Berg ကနှင့်ဂယ်ရီနဗီးလ်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: နိုင်ငံရေး
သူဟာဘောလုံး၏ဂိမ်းအားမိမိအလှူငွေများအတွက် 1999 အတွက်ဗြိတိန် knighthood ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ 1998 မှာတော့ဖာဂူဆန်မှအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာရေးအလှူရှင်တစ်ဦးစာရင်းထဲတွင်အမည်ရှိ လေဘာပါတီ. သူကတစ်ဦး Self-ဖော်ပြထားဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်ပါသည် နှင့်ရာသက်ပန်အလုပ်သမားရေးရာထောက်ခံသူ။ ဇန်နဝါရီလ 2011 အတွက် ဂရေဟမ် Stringerအတွက်တစ်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့အမတ် မန်ချက်စတာ တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ဖာဂူဆန်အဘို့ကိုခေါ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ထောက်ခံသူ, ဘဝသက်တူရွယ်တူ။ ဒီဖြစ်ပျက်ပါကဖာဂူဆန်ကိုပထမဦးဆုံးလက်ရှိသို့မဟုတ်ဟောင်းတဦးဘောလုံးသမားသို့မဟုတ်ဘောလုံးမန်နေဂျာထဲမှာထိုင်စေမယ်လို့ ထာဝရဘုရား၏အိမ်။ Stringer နှင့်သူချင်းမန်ချက်စတာအလုပ်သမားရေးရာအမတ် ရှင်ပေါလု Goggins ဖာဂူဆန်မေလ 2013 ၌သူ၏အငြိမ်းစားထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ဤခေါ်ဆိုမှုထပ်ခါတလဲလဲ။ ထဲမှာသို့သော်အမည်မဖော်သတင်းရင်းမြစ် Daily သတင်းစာကြေးမုံ သတင်းစာဖာဂူဆန်ကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်း 1 သြဂုတ်လ 2013 အပေါ်ပြောဆိုထားသည်။
ထိုစဉ်အတွင်း 2014 စကော့တလန်လွတ်လပ်ရေးဆန္ဒခံယူပွဲဖာဂူဆန်ဟာတစ်ဦးလင်းလင်းထောက်ခံနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည် ပိုကောင်းအတူတကွ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျန်ရှိစကော့တလန်ထောက်ခံကြောင်းကင်ပိန်း။ သူကဝေဖန် စကော့တလန်အမျိုးသားပါတီနှင့်ယင်း၏ခေါင်းဆောင် အဲလက်စ် Salmondစကော့တလန်အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောစကော့ထုတ်ပယ်ဖို့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့ဖြစ်သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ကျန်အတွင်း, ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက်မဲပေးမှ။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ပညာရေး
2009 မှာတော့ဖာဂူဆန်မှ Business Administration အတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလက်ခံရရှိ မန်ချက်စတာမြို့တော်တက္ကသိုလ်.
ဒါဟာသူ 1998 အတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်သခင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, တက္ကသိုလ်ထံမှလက်ခံရရှိဒုတိယဒီဂရီဖြစ်ခဲ့သည်။
Julian Nagelsmann ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Quique Setien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Chris Wilder ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Brendan Rodgers ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Ernesto Valverde ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
သောမတ်စ် Tuchel ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Massimiliano Allegri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Ole ကို Gunnar Solskjear ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
စန်တီယာဂို Solaris ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Nuno Espirito စန်တိုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောနေ့စွဲ: ဇန်နဝါရီလ 26, 2020
ဖရန့်လမ်းပတ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Mauricio Pochettino ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၉
စတီဗင်ဂျရတ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်